UKWAHLUKA KWEMINYAKA KAGWEN STEFANI KUNYE NOBLAKE SHELTON - IINDABA
Umahluko kaGwen Stefani kunye noBlake Shelton
UBlake Shelton kunye noGwen Stefani baneminyaka emithandathu bucala. UStefani uneminyaka emithandathu emdala kunobuhle bakhe. Uneminyaka engama-44, yena uneminyaka engama-50.
Baqala ubudlelwane babo kwi-2015 emva kokubopha ngendlela yoqhawulo-mtshato olubuhlungu. Kwaqala njengobuhlobo obukhule baba luthando njengoko bexhasana, uyalele uShelton Ibhilibhodi Ngo-2016.
UShelton no Stefani ngamnye wabo ubuya njengabaqeqeshi kwiSizini 19 ye Ilizwi . Ixesha lokuqala kwiNBC ngoMvulo, Okthobha 19, 2020 ngo-8 pm Ixesha laseMpuma.
Nantsi into elungileyo ukuyazi:
UShelton Uye wathi Uyonwabile ukukhonza njengoBawo kuBantwana baStefani
Ngelixa engenguye utata wesibini kodwa, uShelton uyalele NAMHLANJE Kwi-2018 yokuba ulutsha lukaStefani lwamnika ulonwabo ngequbuliso ebomini bakhe.
Khange ndiqaphele ukuba ukuza, nangona kunjalo kuyonwabisa kakhulu, watsho.
UStefani wayenoonyana abathathu kunye nomyeni wakhe wangaphambili uGavin Rossdale. UKingston uneminyaka eli-14, uZuma uneminyaka eli-12, u-Apollo uneminyaka esi-6. UShelton akanabo abantwana abasebatsha.
Kule nqanaba ebomini bam, ndiza kufaka (ngaphandle), ngathi, 'Ndicinga ukuba oko kwakungafanelekanga ukuba,' uyalele namhlanje. Kwaye konke kwenzeka ngesiquphe, ubuchule okanye enye.
Isicwangciso sikaShelton kunye noStefani sokutshata emva kobhubhane weCoronavirus
UShelton no Stefani baceba ukutshata, kodwa kude kube semva kobhubhane we coronavirus, unikezelo oluyalelweyo Ngeveki ngoJuni, 2020. Banqwenela ukuba nomtshato ojikelezwe ngabendlu kunye nabahlobo.
I-COVID-19 iliguqulele ilizwe labo ngendlela engalunganga, kuba inamakhaya amaninzi, ubonelelo olukhankanyiweyo. UGwen uyazi ukuba usikelelwe kwaye kufuneka abenomtshato ngokukhawuleza njengoko iingcebiso zokuphambuka ekuhlaleni ziphakanyisiwe.
UStefani wayezibambile emtshatweni noShelton njengoko wayelinde ukubhangiswa ngokusesikweni komtshato wakhe noRossdale kwiCawe yamaKatolika. Inkolo yayibalulekile kuye, wayalela iVeki ngeveki ngo-2019. Uzimisele ukuba wayekulungele ukuqhubela phambili no-Shelton, ubonelelo olukhankanyiweyo.
UGwen kufuneka enze umsitho kunye nolwamkelo kunye nendlu yakhe kunye nabahlobo. Akazange alinde ixesha elide ukuba atshate kunye nokubukela kwendlu kwi-Zoom, ubonelelo olukhankanyiweyo. Kwenze ukuba aqaphele ukuba ukulungele ukutshitshiswa kweli nqanaba kulilize ngenxa yoko kungathatha iminyaka kwinkundla yecawa ukuba ibe nzima ukhetho.
Ulwalamano lwabo lwaqala njengoko bebehamba ngendlela yoqhawulo mtshato, uShelton uyalele Ibhilibhodi Ngo-2016. Emva kokuba uStefani efumanise ngoqhawulo-mtshato wakhe, wacela ukuba baxoxe bodwa kwaye waveza ukuba uhamba ngendlela enxulumene noko. UStefani wafumanisa ukuba uShelton wayehamba ngendlela yoqhawulo mtshato noMiranda Lambert, kwaye wazityand 'igila ukuba wayehamba noqhawulo-mtshato olubuhlungu noRossdale.
Leyo yindlela yokuqalisa kobuhlobo kunye nolwalamano lwethu, ngaloo mini. Ihambe ukusuka apho ukuya kujongana ngokukhawuleza ngeveki nge-imeyile- 'Oku kwenzeke kum, kwenzeke ntoni kuwe?' - mhlawumbi kathathu ngeveki, emva kwemini nganye ukuya, ' Hee, le bubungakanani bocingo lwam ukuba kunokwenzeka unqwenele umxholo wesicatshulwa, utshilo uShelton. Into elandelayo ndiyayazi, ndiyaphakama kwaye nguye konke endikukhathaleleyo, kwaye ndiyabuza ukuba uziva ngokufanayo ngam.
Izigaba: Hulu Iindaba Tech-Iindaba
Starbucks Julayi 4 iiyure
fatima ptacek net efanelekileyo
I-billy bentley net efanelekileyo
ngaba bahambisa iposi ngomhla we-columbus
Ixesha logqirha 5